imithi yesimanje kudinga ochwepheshe abafanelekayo ngubani abe hhayi kuphela diploma wezemfundo, kodwa futhi ulwazi langempela. Thola abantu bangayithola imfundo esezingeni, futhi ndawonye nalo kanye nobufakazi ke kungaba kwelinye Yaroslavl amanyuvesi. Yaroslavl Medical Academy (University) - igama isikhungo sakho semfundo.
Umlando olusemthethweni lenhlangano ekhona manje Yaroslavl zemfundo yezokwelapha waqala ngo-1944. Yaroslavl yasungulwa ngo edolobheni Medical Institute. Noma kunjalo, ngaphambili. Wabonakala esikoleni Belarusian wezokwelapha, okuyinto waxoshelwa ngenxa kokugqashuka kweMpi Yezwe II.
Mayelana 50 eminyakeni eqhutshwa Yaroslavl Institute, bafeza ukuqeqesha abasebenzi bezempilo. Mayelana ngcono inqubo yemfundo, ukuthuthuka isayensi, esikoleni esiphakeme ngo-1994 waklonyeliswa isimo Academy, futhi ngo-2014 - isimo enyuvesi. Namuhla, inhlangano zemfundo ubhekwa kahle esikhulu inyuvesi multidisciplinary. Ngo wabhaliswa ayizinkulungwane eziningana abafundi at 7 izinhlelo undergraduate amakhono kanye nezinhlelo 3 secondary education amakhono.
Izindawo ukuqeqeshwa yokuvuma ukuhlolwa
Yaroslavl Medical Academy (University) inikeza eyodwa kuphela isiqondiso undergraduate. igama Ezazimzungezile - "Bona social work". Abantu abafika ngemva kokuphothula esikoleni esiphakeme kumele uhlinzeke imiphumela ukuhlolwa oku isiRashiya, wesifundo sezenhlalo kanye nomlando. Abantu abanegciwane le-ephakeme noma yesibili sokufundela imfundo, thatha ukuhlolwa eNyuvesi.
imithetho efanayo mayelana ukuhlolwa yokuvuma, futhi isenzo ku izinhlelo okukhethekile. Umehluko amanga kuphela izinto kubaqoqi. On "Medical Biochemistry", "ndaba yezokwelapha", "Pediatrics", "Dentistry" futhi "Ikhemisi" kusethelwe yokubuyiswa Russian ulimi, neyezinto eziphilayo.
Uhlelo UMTHETHO ( "ekhemisi", "Dentistry Zokuzivikela", "ukuhlola laboratory") Kulula ukwenza. Yaroslavl Medical Academy akudingi ngokubeka yimuphi izivivinyo. Endabeni ka lilingane nenani encintisana kanye inani lezihlalo uyasho ukuthi bonke abantu abaye uhambise iphakethe ephelele kwemibhalo.
Inombolo okungenani amaphuzu
Minyaka yonke, Ministry of Health yezwe Ukusetha i inkomba ezifana inombolo okungenani amaphuzu. It ikuvumela ukuba ukhiphe umkhankaso yokuvuma labo abanalo ulwazi olwanele. Uma, ukwenza isibonelo, umfakisicelo uzothola imiphumela ukuhlolwa amagugu incane kakhulu, ngeke ukwamukela amadokhumenti Yaroslavl Medical Academy.
IKomiti nezokwamukela kufanele zibike njalo ngonyaka izicelo kwi ubuncane Imiphumela eyamukelekayo. The esiphezulu izikolo ubuncane for 2017 zavunyelwa ngesikhathi "amazinyo". Ukwamukelwa kudingeka isiRashiya futhi biology amaphuzu amaphuzu okungenani angu-60, futhi kwamakhemikhali - amaphuzu okungenani 50. Ephansi izikolo ubuncane kusethelwe ku- "social work" (amaphuzu 36 ku isiRashiya, amaphuzu 32 kumlando futhi 42 amaphuzu wesifundo sezokuhlalisana kwabantu).
Yaroslavl Medical Academy odlulayo izikolo oluphakeme okusezingeni eliphezulu izindawo izindleko. Lesi simo ngenxa umncintiswano omkhulu. Ngezansi izibalo 2016 ezindaweni kwesabelomali:
ukuze "social work" kungukuthi labelwe isikhala, ngakho amaphuzu Ukudlula ngesabelomali engakaze okumisiwe;
aphansi ubuncane ukubaluleka eyamukelekayo kwaba bebheke "kwengqondo emitholampilo" - 195 amaphuzu;
izikolo ephakeme babonakala ku "Medical Biochemistry" (217 amaphuzu), "Ikhemisi" (222 amaphuzu), "i-Pediatrics" (226 amaphuzu);
eliphakeme Ukudlula izikolo babe esingokwemvelo "Uma kwenzeka zokwelapha" (234 amaphuzu) kanye "amazinyo" (248 amaphuzu).
Imininingwane Interesting abafundi kuyoba umncintiswano izinkomba etholakalayo sokulungiselela (ibhajethi). Ngo-2016, eneminyaka engu-mancane amathuba okuthi "ndaba yezokwelapha" - abantu 8 endaweni. Umncintiswano eliphakeme kwaphawuleka kule "Biochemistry Yezokwelapha '- 34 endaweni ngayinye.
Ekuphetheni, kuyafaneleka ukuthi inhlangano zemfundo kubhekwe - kuyinto ekuthuthukiseni isikole ezinkulu okusezingeni eliphezulu. Ewufanele ukunakwa izicelo, ngoba eziningi izindawo isabelomali has Yaroslavl Medical Academy. Izindleko ukuqeqeshwa kunqunywa kuncike isiqondiso. Kunabo bonke ngo-2016 eneminyaka engu-ku "social work" (acishe abe yizinkulungwane 27.). Inani eliphakeme kwaba ngo "Medical Biochemistry" (ruble phezu ayizinkulungwane. 136).
Iyini isikweletu ngaphansi kwe-ID? Yimiphi imigomo yokukhokha kwemali emuva kwe-ID? Ulwazi jikelele
1983 - unyaka sesilwane ekhalendeni Eastern? Izici kanye Oluvumelana